FAMATSIANA HERINARATRY NY JIRAMA : Tsy manana ahiahy intsony ny Faritra Analanjirofo
Mahavelombolo tanteraka ny fomba fiasan’ny Jirama ao amin’ny Faritra Analanjirofo sady tsy hadinon’ny Tale jeneralin’ny Jirama vonjimaika, Dr Ravelojaona Albert. Ho an’ny distrikan’i Vavatenina, dia ny 15 oktobra lasa teo no nahazo milina manana tanjaka 160 Kw. Efa nanana 360 Kw ny tao Vavatenina mialoha io. 25 octobre 2019
Izany hoe tafakatra 520 Kw ny herinaratra vokarin’ny Jirama ao Vavatenina amin’ izao fotoana izao. Nanomboka tamin’ny fahatongavan’io milina vaovao avy tamin’ny Jirama foibe io dia foana tanteraka ny delestazy ao Vavatenina. Tsy misy ahiana ny jiro mandritra ny festival Jerijery.
Ho an’ny ao Soanierana-Ivongo, dia efa tonga tamin’ny 14 septambra teo ihany koa ny milina vaovao izay manana tanjaka 200 Kw mahazaka 160 Kw. Efa nanana milina 200 Kw sy 160 Kw ny Jirama Soanierana-Ivongo mialoha an’ io. Efa tsy hain’ny mponina ao Soanierana-Ivongo izany delestazy izany ankehitriny. Ampy tsara ny herinaratra. Ao Mananara-Avaratra, tsy misy olana intsony ny herinaratra. Toraka izany ihany koa ny ao Maroantsetra. Ho avy ny milina vaovao ho an’i Sainte-Marie. Rehefa tonga io, dia tsy hisy intsony ilay delestazy isaky ny maraim-be ao Sainte-Marie.
Nitondra fisaorana ho an’ny Tale jeneralin’ ny Jirama sy ny fitondram-panjakana foibe ny lehiben’ny Jirama ao Analanjirofo amin’izao fitsinjovana manokana ny Faritra Analanjirofo izao. Porofo mivaingana izao zava-misy izao fa miasa ny Jiro sy Rano Malagasy.